Andkpụrụ na Iwu-NINGBO SUNSOUL UTgbọ ala akụrụngwa CO., LTD
>lọ>Gbasara anyị>Andkpụrụ na Iwu
Kpụrụ ụlọ ọrụ
Nkwalite siri ike na-esite na ike dị n'ime dị ike.
Sunsoul na-eduzi ma na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ dị irè bụ ihe ndabere maka uto ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ. Therụsi ọrụ ike na mbọ nke ndị ọrụ na Sunsoul kemgbe ọtụtụ afọ enwere ike ịchịkọta ụkpụrụ ụlọ ọrụ ise edepụtara n'okpuru, nke nyeere aka ịkwalite uto nke ụlọ ọrụ n'akụkụ dị iche iche dịka nyocha na mmepe, ụkpụrụ, uru mmekọrịta, uto ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ibu ọrụ.
• Mee ka asọmpi ndị ahịa dịkwuo mma
Ndị ahịa bụ isi ihe ga-eme ka anyị nwee ọganiihu. Anyị na-ekerịta ahụmịhe anyị na ndị ahịa anyị ma na-enye azịza zuru oke maka ha iji mezuo ebumnuche ha nke ọma na nke ọma.
• Innovation na-eduga n'ọdịnihu
Innovation bụ ihe dị mkpa maka ndụ anyị. Anyị nwere ihe ịga nke ọma na-atụgharị nrọ n'ime teknụzụ na ngwaahịa. Ọkpụkpụ anyị bụ okike na ahụmịhe.
• Meewanye Uru Companylọ Ọrụ
Anyị na-ewepụta uto bara uru iji hụ na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma site na itinye pọtụfoliyo azụmahịa anyị ziri ezi. Anyị na-agbasi mbọ ike maka izu okè ma na-agbaso ịdị mma.
• Ghọta Nrọ nke Ndị Ọrụ
Pụrụ iche ọrụ bụ ntọala maka ụlọ ọrụ anyị ịga nke ọma. Ejirimara ụlọ ọrụ anyị site na nkwụsi ike, nghọta na nkwanye ùgwù. Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ka ha nwe ụlọ ma too ya na ụlọ ọrụ ahụ.
• Nabata Ọrụ Ndị Na-elekọta Mmadụ
Anyị na-etinye aka n'ịkwalite usoro mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na mmelite, ntụnye na teknụzụ ọhụụ. Anyị na-etinye aka na ụkpụrụ ụwa niile, ụmụ amaala ụlọ ọrụ dị mma na gburugburu ebe obibi dị mma. Iguzosi ike n'ezi ihe na-eduzi omume anyị n'ebe ndị ọrụ anyị, ndị mmekọ azụmaahịa na ndị nwere oke ego nọ.
Amụma Ogo assion Ọmasị maka Ọkasị
• Ntachi Obi maka Mmebi
A na-eme ihe anyị ka anyị nwee ike izere ọdịda ọ bụla na ngwaahịa na usoro anyị. Anyị na-atụle Ọrịa Efu dị ka ihe mgbaru ọsọ dị mma. Anyị na-akwado ịhazi usoro nke ngwaahịa na usoro.
• Afọ Ojuju Ndị Ahịa
Ihe omume anyị bụ ndị ahịa na-elekwasị anya ma anyị gbalịsiri ike ịzụlite mmekọrịta mmekọrịta na-aga nke ọma site na mbido, site na itinye ọrụ dị irè na njikwa nhazi na ntinye olu, niile na ndụ ndụ.
• Ọganihu Na-aga n'ihu
Principlekpụrụ anyị n'achụmnta ego bụ iji meziwanye asọmpi anyị. Inwe nyocha nke ọma na-akpata site na itinye PDCA na isii Sigma ngwaọrụ dị mma, ngwa ngwa na nhazi usoro na ngwaahịa na usoro, ịkekọrịta omume kacha mma yana ihe ọhụụ bụ ntọala nke ịbawanye ogo na arụpụta ọrụ.
• Mmụọ achụmnta ego, Nkwenye & Ntinye Aka
• Anyị na-akwado mmụọ azụmaahịa, inye ike na itinye aka nke ndị ọrụ anyị site na ịmalite na ịhazi yana iji ihe ọmụma ha, ahụmịhe na nka ha.
• Amụma gburugburu ebe obibi, Ahụike Ahụike na Ọrụ
• Anyị na-ahụ maka nkwa enyi anyị maka gburugburu ebe obibi anyị, na-asọpụrụ iwu na ihe ndị ọzọ achọrọ, yana ịmepụta ebe ọrụ nchekwa na ahụike maka ndị ọrụ niile n'oge niile.
• isingzụlite mmata ndị ọrụ na nchekwa na ahụike, anyị na-agba ndị ọrụ niile ume ka ha sonye n'ihe omume metụtara mmụta na mmụta ahụike.
• Anyị na-enyocha mmetụta gburugburu ebe obibi ga-ekwe omume na mmalite nke ngwaahịa na mmepe usoro. Ọ bụ nzube anyị iji gbochie ma ọ bụ belata mmetọ.
• Anyị na-ebelatakwa ihe ndị na-emetọ emetọ na-ekpofu mmetọ na nhazi usoro, site na mmụba na-aga n'ihu nke ndị ọrụ niile na-arụ.
• guaranteekwado ọnọdụ nchekwa dị mma, ahụike yana ntụkwasị obi bụ akụkụ nke ọrụ mmekọrịta anyị.